बुद्धको ‘नाम बेचेर’ वर्ल्ड रेकर्ड ! – Everest Times News
बुद्धको ‘नाम बेचेर’ वर्ल्ड रेकर्ड !
२०७४ फाल्गुन १८, शुक्रबार २२:१०
विश्वका तारा भगवान गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको तथ्य कहीकतैबाट लुकेको छैन । तर, नेपालीलाई भ्रम छर्ने गरी केही नेपालीहरु नै बुद्धको नाममा अनेकन धन्दा गर्न व्यस्त छन् ।
फागुन १९ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा यस्तै धन्दा हुँदैछ । जहाँ ७५ हजार मानिसहरु एकैपटक जम्मा भएर ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’ भनेर एक स्वरमा कराउने भनिएको छ । विश्व कीर्तिमान परिषद् नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमका अभियन्ता गायक धिरज राई हुन् ।
यसलाई नेपालका म्याराथन टक शो चलाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका रवि लामिछानेले प्रमोसनमा सहयोग गरेका छन् । साथमा नेपालका प्रसिद्ध मानिने डा भोला रिजाल, नायक राजेश हमाल, खेलाडी दीपक विष्ट पनि उक्त रेकर्डमा भेला हुन सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यो रेकर्ड राख्नका लागि उपस्थित हुन पत्रचार गरिएको छ । यसअघि भारतमा ४६ हजार ६६० ले एकैपटक ‘बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया’ भनेर उच्चारण गरेकोले उक्त रेकर्ड तोड्न भन्दै उपस्थित हुनैपर्ने कारण उल्लेख गरिएको छ ।
भारतको त्रिसुर जिल्लाको एक मन्दिरमा द आर्ट अफ लिभिङले फेब्रुअरी २, २०१४ ती व्यक्तिहरुले ‘जानपना’ कविता वाचन गरेर रेकर्ड राखेको रहेछ । यो रेकर्ड कायम गर्दा के आर्ट अफ लिभिङले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनी दाबी गरेका थिए होला ? यसबारे आर्ट अफ लिभिङको आधिकारीक वेबसाइटमा हेर्दा बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर रविशंकरले बताएको भेटिन्छ ।
बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर रेकर्ड राख्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य होइन । यो कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्य भनेका भारतले राखेको त्यो विश्व रेकर्ड तोड्नु हो । यसका लागि ४७ हजार मान्छे भए पुग्छ । त्यसैले शुरुमा यसका अभियन्ता गायक धिरज राईले ५० हजार मानिस जम्मा हुने भनेर अभियान चलाएका थिए ।
मात्र यही अभियान तोड्न र आफ्नो नाम गिनिज बुकमा दर्ता गराउन उनको यो अभियान हो । बुद्ध नेपालमा जन्मेकै हुन् भनेर नारा नबनाए सोचे जति मानिस उपस्थित हुन नसक्ने अनुमानमा आयोजकलेसमेत यस्तो जुक्ति निकालेको देखिन्छ। गायक राईले धम्मपद उच्चारण गरी रेकर्ड राख्ने भनेर सुरु देखि भनेकै भए ७५ हजार मानिस जम्म हुन कुनै गाह्रो हुने देखिन्न । किन कि बौद्धमार्गीमात्र हैन हरेक नेपालीले उनलाई पक्कै साथ दिने थिए नै ।
गिनिज बुकमा नाम लेखाउन अनेक प्रयास
कुनै समय ‘सेक इट सेक इट’ बाट चर्चामा आएका गायक राई नेपाली माइकल ज्याकसनका रुपमा पनि चिनिन्छन् । तर, समयले फड्को मार्दै जाँदा राईको ‘सेक इट’ स्टेजमा चल्न सकेन । त्यसपछि भने राई आफ्नो नाममा रेकर्ड राख्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । रवि लामिछानेको म्याराथन टक शोबाट उनले विश्व कीर्तिमानी अभियान शुरु गरे । बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल अंग्रेजी गीत गाएर उनले त्यतिबेला सहभागीको प्रमाणपत्र पाएका थिए । राई ‘र्‍याफ्टिङ कन्सर्ट’ मा पनि सहभागी भए । गायक इन्सु राईले गिनिज बुकमा नाम लेखाउन भनी आयोजना गरिएको उक्त कन्सर्टको प्रमाणपत्र भने लिन पाएनन् । किनभने उक्त रेकर्ड कायम नै हुन सकेन ।
रेकर्ड राखेर के हुन्छ ?
गिनिज रेकर्डमा हरेक दिन संसारभरबाट विभिन्न किसिमका रेकर्डहरु कायम राखिन्छ । सबैभन्दा होचो मान्छे, सबैभन्दा अग्लो मान्छे, सबैभन्दा दौडने, यस्तै अनेक अनेक । नेपालीहरुले पनि यस्ता विभिन्न रेकर्ड कायम गरेका छन् । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले आफुले बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनी प्रचार गर्न म्याराथन टक शो कार्यक्रम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, गिनिज रेकर्डमा उनको उक्त भनाई कतै उल्लेख छैन । केवल ६२ घन्टा म्याराथन कार्यक्रम चलाए भन्ने रेकर्ड छ । योगामा नेपालकै उत्तम मोक्तानले कीर्तीमान कायम गरेका छन् । विश्व कीर्तिमान रेकर्डले के फाइदा हुन्छ ? मोक्तानले भनेका थिए, ‘त्यही एउटा प्रमाणपत्र पाउने हो, आफूलाई चिनाउने मौका ।’
अहिले हुन लागेको अभियान पनि त्यति नै हो । टुँडिखेलमा भेला हुने ७५ हजारको भिड केवल आयोजकहरुको नाम चर्चामा ल्याउनका लागि भएको कतिपयको आरोप छ ।
युनेस्कोमा बुद्ध नेपालमा जन्मेको रेकर्ड
भगवान गौतम बुद्धको जन्म नेपालमै भएको हो । इसापूर्व २४९ मा मध्य भारतका सम्राट अशोक आफ्ना धर्मगुरु उपगुप्तसहित आफ्ना राज्यभिषेकको बीसौं वर्षमा शाक्यमुनि सिदार्थ गौतम पवित्र जन्मस्थानको तीर्थयात्रा गरेर अशोक स्तम्भ निर्माण गरेका थिए । नेपालको लुम्बिनीमा रहेको अशोक स्तम्भ नै शाक्यमुनि सिदार्थ गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्म भएको प्रत्यक्ष र अकाट्य प्रमाण हो ।
ऐतिहासिक तथ्य, पुरातत्विक अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खननबाट प्राप्त पुरातत्विक प्रमाणहरुको आधारमा शाक्यमुनि सिदार्थ गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएकोले संयुक्त राष्ट्रसंघको युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा १९९७ मा सुचिकृत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बुद्धको नाममा जनतालाई किन दुःख दिने ?